トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Imifuziselo pa lokukhetha isimbo ekulweni specs
Lo matshini pa, kukho into ekuthiwa zezirhubuluzi. Spec kwaye ixabiso lenani emele amathuba okuba le jackpot. Pa kweenkcukacha, uya ihlelwa iintlobo ezintathu eziphambili. Kwi uhlobo jackpot amathuba kuthiwa na omnye okanye ngaphezulu ophezulu-zezirhubuluzi zezirhubuluzi ngokupheleleyo imizuzu 360, uhlobo ekuthiwa imizuzu 300 ka-1 ngaphambi nasemva kokuba uhlobo eliphakathi zezirhubuluzi ukukhanya middleweight, ekupheleni ngaphambili nasemva 1 nemizuzu eli-100 Amadeji okanye Dejihane-Yu usaqala call ngubani na iintlobo, kodwa ihlelwa kalukhuni, ndoxelelwa ngubani zohlulwa ngokwendidi ezintathu. I elikhulu inani
ngokuqinisekileyo, ayithethi hit kakhulu, kuya kuba ukuba kunzima ukubetha.
phakathi iintlobo ezahlukeneyo iinkcukacha, yinguqulelo ukucinga imodeli win. Ethetha imodeli phumelela, kusekho kukho amandla iziqhushumbisi ze inkokhelo iya kuba kukuba lula unxibelelwano Chan kukhombisa. Ngoko ke, kwimeko ofuna amaninzi kokuphumelela, Kakade ophezulu-zezirhubuluzi kuyacetyiswa. Linokuba yi umzuzu omkhulu, kodwa hit nzima, kuba amandla onokudubula xa sele waba ngaphezu kwezinye specs, ukuphumelela linokuba uya kuba ubemde zezirhubuluzi.
Noko ke, high-risk, kuba imbuyekezo ephakamileyo, ukuba injongo ngaphandle, oko kufuneka indlela yaso zotyalo-mali. Ukongeza, xa imodeli ebizwa yakutsha Ebuzwa ndiyeke iintlobo, uhle ethandwayo, nawe ngokubanzi luqina amathuba yaligqiba eliphezulu-zezirhubuluzi kunye nohlobo specs ephakathi. Ukuze siphumelele, kodwa othile zikwafune ukulungela zotyalo-mali, ngethemba eqongeni ukuze ukhethe, usenokuba siqonde nokuba ngaphantsi Dalian Chang utyalo-mali.
Ukongeza, ndifuna ukuba siphumelele, ukuba loo mdlalo kangaka enkulu ufuna ukuya kwenye kwaye gqolo ogqiba ukuba buhlungu, ilungile, khetha i specs ephakathi. Kwaye iziqalelo ze izakhi kunye umdlalo lokuphumelela, nje elungileyo ukonwabela, lo zezirhubuluzi. Kwiminyaka yakutshanje, yaphuma ezinye iimodeli, ebizwa oomatshini ST, kukho kwakhona hlobo ixesha olichitha iqondo kube mnandi.
Ukongeza, unako kwakhona ukuba rhoqo Chang. Kwaye, abo bacinga ukuba I wonder ndifanele okanye aphumelele kancinci uze udlale kakhulu, Dejihane kucetyiswa. enye Times of the intlawulo ngaphantsi, kodwa sikhona ibhola ngaphandle ngokwaneleyo akumangalisi ukuba unxibelelwano kunye Chang. imali Investment imali -ngomtsalane specs ngaphezu nantoni na ukuze abe amancinci.
Ngale ndlela, nokuba ngokucacile bathi modeli win ukukhetha, ufuna koko ukuba luhlobo luni na indlela yokoyisa, imodeli ozikhethileyo ziya lishintshile kakhulu. Ingaba ufuna zuza, baya kuqhubeka nefuthe kuba ukuba lingakanani ukusebenza okanye ixesha.
Kakade, libya jackpot ngokuqinisekileyo, kuba xa kwimeko umdlalo eliphezulu elide yemodeli wayeza ixesha lokuyeka ngokuqinisekileyo, kukho kwakhona iqela yokuba kuya kuphela xa avukwe ngokupheleleyo, ezifana njengabasebenzi ofisi emva kokuba umsebenzi . Le ndlela yenziwe ngayo elincinane (kakade, kukho kwakhona kuyenzeka ukuba uwine enkulu ukuphinda kuyo imihla emininzi, ekugqibeleni njani ... idibane) umngcipheko
utyalo-mali, buthathaka amandla iziqhushumbisi ze-intlawulo, umyinge wotyalo-mali, imifuziselo ukuba kungenzeka ukuba babe baninzi, ngenxa yamandla iziqhushumbisi ze-intlawulo, kukuba kwakhona mnye-shot liguqulwe. Ukuba ukuthi specs abazi kakuhle, ngoko kuluhlu iinkcukacha ngakumbi kwiimagazini enjalo ngoku, phambi kokuba uye kudlala, kusenokuba kuhle ukuba ufunda ngokulandelelana reference. Iimfaniso ukuba kungenzeka ukuba babe baninzi, ngenxa yamandla iziqhushumbisi ze-intlawulo, kukuba kwakhona mnye-shot liguqulwe. Ukuba ukuthi specs abazi kakuhle, ngoko kuluhlu iinkcukacha ngakumbi kwiimagazini enjalo ngoku, phambi kokuba uye kudlala, kusenokuba kuhle ukuba ufunda ngokulandelelana reference. Iimfaniso ukuba kungenzeka ukuba babe baninzi, ngenxa yamandla iziqhushumbisi ze-intlawulo, kukuba kwakhona mnye-shot liguqulwe. Ukuba ukuthi specs abazi kakuhle, ngoko kuluhlu iinkcukacha ngakumbi kwiimagazini enjalo ngoku, phambi kokuba uye kudlala, kusenokuba kuhle ukuba ufunda ngokulandelelana reference.